အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ စာသင်ခန်းအတွင်း မီးခိုးငွေ့ဝင်ကာ ကလေး၂၀ ခန့်အပါအဝင် စုစုပေါင်းလူနာ ၂၄ ဦး မူးမေ့သတိလစ်ကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနသို့ ရောက်ရှိ.. •
14/05/2019 lin htet News 0
Educator English language School အမည်ရှိ ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် မေ ၁၄ ရက်က စာသင်နေစဉ် အခန်းအတွင်းသို့ မီးခိုးငွေ့ဝင်ကာ ကလေး ၂၀ ခန့်အပါအဝင်စုစုပေါင်းလူနာ ၂၄ ဦး မူးမေ့သတိလစ်သဖြင့်….
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေသော်လည်း စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာခင်သိင်္ဂီမြင့်ကပြောကြားသည်….
` ကလေးတွေရောက်လာတာဟုတ်ပါတယ် အခြေအနေကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး အားလုံးအကုန်ကောင်းပါတယ်´၎င်းကပြောကြားသည်…
အဆိုပါကျောင်းကို မရမ်းကုန်း(၂)ရပ်ကွက် ဦးအောင်ဇေယျလမ်းနှင့် အပေါ်ဗဟိုလမ်းအနီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရသည်…
ဖြစ်စဉ်မှာ မေ ၁၄ ရက်က စာသင်နေစဉ် မီးပြတ်သဖြင့် ကျောင်းအတွင်းရှိ မီးစက်နှိုးရာမှ မီးစက်ချွတ်ယွင်းသွားခြင်းကြောင့် အခန်းအတွင်း မီးခိုးငွေ့များဝင်ကာယင်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်…
လူနာများကိုပို့ဆောင်ရာတွင် လူနာတင်ယာဉ်၁၁ စီးဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး မြတ်ကုသိုလ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှလူနာတင်ယာဉ်ခုနစ်စီး၊ မြန်မာ့ကြယ်ဖြူမှတစ်စီးနှင့် လှိုင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးမှနှစ်စီးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်….
`ဖြစ်စဉ်က ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာဖြစ်တာပါ လူနာတွေကတော့အရမ်း မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး´ဟု မြတ်ကုသိုလ် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုနိုင်မင်းသန့်ကပြောကြားသည်…
`ကျွန်တော်အဲဒီအနီးနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတော့ ၁၀ နှစ်ခန့် ကလေးအရွယ်နှစ်ယောက်ကထွက်ပြီးအကူအညီတောင်းတယ်….
အဲဒီနားမှာ အစိုးရ တယ်လီဖုန်းလိုင်းပြင်တဲ့သူရယောက်လောက်ရှိတယ် သူတို့နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးသွားကြည့်တယ် သွားကြည့်တော့ သူတို့တွေက မူးလဲတဲ့သူကလဲ….
ငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့သူက ထိုင်နေတယ်၊ အဲလိုအနေအထားနဲ့တွေ့ရတော့ ဝိုင်းဝန်းပြီးအပြင်ဆွဲထုတ်ကြတယ်….
အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်တွေခေါ်တယ် ခေါ်တဲ့အခါ မြတ်ကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီး ခေါ်လိုက်တယ် အချိန်မီဆေးရုံတွေကိုအသီးသီးပို့နိုင်ခဲ့တယ်….
ဆေး ရုံ မ ပို့ ခင် ကျွန် တော် တို့ တတ် သ လောက် ပြု စု ခဲ့ တယ်´ ဟု ဖြစ် စဉ် အား မျက် မြင် တွေ့ ရှိ သူ တစ် ဦး ကပြော ကြား သည်….
စိုး ရိမ် ရ သည့် အ ခြေ အ နေ မ ဟုတ် သ ဖြင့် ယင်း နေ့ တွင် ပင် ဆေး ရုံ ကြီး မှ တ ဆင့် မိ ဘ များ ထံ သို့ အ သီးသီး ပို့ ဆောင် ပေး ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ သည်….
အငျးစိနျမွို့နယျရှိ ပုဂ်ဂလိကစာသငျကြောငျးတဈကြောငျး၌ စာသငျခနျးအတှငျး မီးခိုးငှဝေ့ငျကာ ကလေး၂၀ ခနျ့အပါအဝငျ စုစုပေါငျးလူနာ ၂၄ ဦး မူးမသေ့တိလဈကာ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးအရေးပျေါဌာနသို့ ရောကျရှိ..
Educator English language School အမညျရှိ ပုဂ်ဂလိကစာသငျကြောငျးတဈကြောငျးတှငျ မေ ၁၄ ရကျက စာသငျနစေဉျ အခနျးအတှငျးသို့ မီးခိုးငှဝေ့ငျကာ ကလေး ၂၀ ခနျ့အပါအဝငျစုစုပေါငျးလူနာ ၂၄ ဦး မူးမသေ့တိလဈသဖွငျ့….
ရနျကုနျဆေးရုံကွီးအရေးပျေါဌာနသို့ ရောကျရှိလာပွီး ဆေးကုသမှုခံယူနသေျောလညျး စိုးရိမျရသညျ့အခွအေနမေဟုတျကွောငျး ရနျကုနျဆေးရုံကွီးမှ ဆေးရုံအုပျဒေါကျတာခငျသိင်ျဂီမွငျ့ကပွောကွားသညျ….
` ကလေးတှရေောကျလာတာဟုတျပါတယျ အခွအေနကေစိုးရိမျရတဲ့အခွအေနမေဟုတျပါဘူး အားလုံးအကုနျကောငျးပါတယျ´၎င်းငျးကပွောကွားသညျ…
အဆိုပါကြောငျးကို မရမျးကုနျး(၂)ရပျကှကျ ဦးအောငျဇယေလြမျးနှငျ့ အပျေါဗဟိုလမျးအနီးတှငျ ဖှငျ့လှဈထားကွောငျး သိရသညျ…
ဖွဈစဉျမှာ မေ ၁၄ ရကျက စာသငျနစေဉျ မီးပွတျသဖွငျ့ ကြောငျးအတှငျးရှိ မီးစကျနှိုးရာမှ မီးစကျခြှတျယှငျးသှားခွငျးကွောငျ့ အခနျးအတှငျး မီးခိုးငှမြေ့ားဝငျကာယငျးကဲ့သို့ဖွဈသှားရခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ…
လူနာမြားကိုပို့ဆောငျရာတှငျ လူနာတငျယာဉျ၁၁ စီးဖွငျ့ ပို့ဆောငျခဲ့ပွီး မွတျကုသိုလျလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့မှလူနာတငျယာဉျခုနဈစီး၊ မွနျမာ့ကွယျဖွူမှတဈစီးနှငျ့ လှိုငျလူမှုကယျဆယျရေးမှနှဈစီးဖွငျ့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ….
`ဖွဈစဉျက ၁၀ နာရီခှဲလောကျမှာဖွဈတာပါ လူနာတှကေတော့အရမျး မစိုးရိမျရတော့ဘူး´ဟု မွတျကုသိုလျ လူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့မှ ကိုနိုငျမငျးသနျ့ကပွောကွားသညျ…
`ကြှနျတျောအဲဒီအနီးနားက လကျဖကျရညျဆိုငျမှာထိုငျနတေော့ ၁၀ နှဈခနျ့ ကလေးအရှယျနှဈယောကျကထှကျပွီးအကူအညီတောငျးတယျ….
အဲဒီနားမှာ အစိုးရ တယျလီဖုနျးလိုငျးပွငျတဲ့သူရယောကျလောကျရှိတယျ သူတို့နဲ့ဝိုငျးဝနျးပွီးသှားကွညျ့တယျ သှားကွညျ့တော့ သူတို့တှကေ မူးလဲတဲ့သူကလဲ….
ငုတျတုတျထိုငျတဲ့သူက ထိုငျနတေယျ၊ အဲလိုအနအေထားနဲ့တှရေ့တော့ ဝိုငျးဝနျးပွီးအပွငျဆှဲထုတျကွတယျ….
အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျတှခေျေါတယျ ချေါတဲ့အခါ မွတျကုသိုလျကိုကြှနျတျောတာဝနျယူပွီး ချေါလိုကျတယျ အခြိနျမီဆေးရုံတှကေိုအသီးသီးပို့နိုငျခဲ့တယျ….
ဆေး ရုံ မ ပို့ ခငျ ကြှနျ တျော တို့ တတျ သ လောကျ ပွု စု ခဲ့ တယျ´ ဟု ဖွဈ စဉျ အား မကျြ မွငျ တှေ့ ရှိ သူ တဈ ဦး ကပွော ကွား သညျ….
စိုး ရိမျ ရ သညျ့ အ ခွေ အ နေ မ ဟုတျ သ ဖွငျ့ ယငျး နေ့ တှငျ ပငျ ဆေး ရုံ ကွီး မှ တ ဆငျ့ မိ ဘ မြား ထံ သို့ အ သီးသီး ပို့ ဆောငျ ပေး ခဲ့ ကွောငျး သိ ရ သညျ….
ထူးဆန်းသောသူခိုးမှ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ မစင်စွန့်ထားခဲ့ပြီး သေတ္တာနှစ်လုံးနဲ့ ရွှေထည် သိန်း(၂၀၀) ဖိုးခိုးယူ